हामी ब्रान्ड र गुणस्तर दुवैमा अगाडि छौँ - Naya Patrika
हामी ब्रान्ड र गुणस्तर दुवैमा अगाडि छौँ
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं | असार २६, २०७४
करिब एक वर्षदेखि नेपाली बजारमा युनाइटेड सिमेन्ट बिक्री हुँदै आएको छ । ललितपुरको लेलेमा रहेको चुनढुंगा खानीबाट आफैँले क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगले धादिङमा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । अहिले दैनिक २१ हजार बोरा उत्पादन क्षमता भएको उद्योगले आप्mनो गुणस्तर र बजारीकरण बढाउन १५ बोरा सिमेन्टमा १ बोरा सित्तैमा दिने उपहार योजना पनि ल्याएको छ । नेपालका सिमेन्ट उद्योग, आयात प्रतिस्थापनदेखि युनाइटेड सिमेन्टको गुणस्तरको सेरोफेरोमा उद्योगका ब्रान्ड एन्ड प्रोमोसन हेड सुवास खतिवडासँग गरिएको कुराकानी :
सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ र हुन आँट्यौँ भनेको पनि पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अहिले हामी कहाँ छौँ ?
हामी अहिले पनि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेका छैनौँ । मागअनुसारको आपूर्ति अहिले पनि हुन सकेको छैन । ठूलाठूला प्लान्ट जडान भइरहेका छन् । उनीहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि के हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, अहिलेको अवस्थामा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छैनौँ ।
सिमेन्ट भरिएको बोरामा मात्र आत्मनिर्भर भएर हुन्न । त्यसको कच्चा पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । पहिले विदेशी ब्रान्डमै सिमेन्ट भित्रिन्थ्यो । अहिले त्यो धेरै मात्रामा कमी भएको छ । तर, सिमेन्टको सबैभन्दा महŒवपूर्ण कच्चा पदार्थ क्लिंकर हो । त्यसका लागि नेपालमा प्रशस्त खानी छन् । त्यही खानीबाट निकालेर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आत्मनिर्भर हुनु मात्र पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुनु हो । विदेशबाट क्लिंकर ल्याएर यहाँ पिँध्दैमा आत्मनिर्भर भएको मान्न सकिन्न ।
यसका लागि चाहिने चुनढुंगा नेपालमा पुग्ने मात्रामा उपलब्ध हुन सक्छ होइन र ?
नेपालमा चुनढुंगा कति परिमाणमा उपलब्ध छ भन्ने विषयमा खानी तथा भूगर्भ विभागले मात्र बताउन सक्ला । तर, चुनढुंगा मात्र भएर भएन । त्यसलाई प्रशोधन गर्ने मेसिन पनि चाहियो । चुनढुंगालाई प्रशोधन गरेर क्लिंकर बनाउने प्लान्ट चाहियो । तर, यस्ता प्लान्ट कम छन् । अहिले करिब चार दर्जन सिमेन्ट उद्योग छन् । तर, आफैँ क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योग भनेको डेढ दर्जन पनि छैनन् । बाँकी सबै क्लिंकर डिपेन्डेन्ट युनिट छन् । ठूला युनिटले क्लिंकर पनि बिक्री गरिरहेका छन् । तर, नेपालको उत्पादनका लागि नेपालकै क्लिंकर मात्रले पनि पुग्दैन । उदाहरणका लागि युनाइटेड सिमेन्टको माग बढ्दै गयो । अब हामी क्लिंकर बिक्री गर्दैनौँ । किनकि उत्पादन गर्ने क्लिंकर हाम्रै लागि मात्र पुग्नेछ । क्लिंकर बनाउनेले पनि चाहिएजति क्लिंकर दिन नसकेकाले हामी भारतमा निर्भर हुनुपरेको छ । भोलि आउने ठूला उद्योगले धेरै क्लिंकर उत्पादन गरी बिक्री गरे भने बल्ल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ ।
नेपालमा पनि सिमेन्ट उद्योग करिब चार दर्जन भइसके । युनाइटेड सिमेन्ट पनि त्यसैमा छ । नेपालमा देखासिकी वातावरण छ । युनाइटेड सिमेन्ट के–कस्तो अध्ययन तथा तयारीका साथ आएको हो ?
हामी देखासिकीको आधारमा आएका होइनौँ । यो अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको परियोजना हो । यत्ति ठूलो आयोजना देखासिकीमा मात्र पक्कै गरिँदैन । धेरै कोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गरेर, सिमेन्ट उद्योग कहाँ राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर नै उद्योग स्थापना गरिएको हो । काठमाडौंको बजारलाई विशेष ध्यान दिएर यहाँबाट नजिक धादिङमा उद्योग राखिएको हो ।
बजारमा तपाईंहरुको स्थान कस्तो छ ?
आजको ब्रान्ड पोजिसनअनुसार उत्पादन सुरु गरेको एक वर्षमै हामी ब्रान्ड र गुणस्तर दुवैका हिसाबले अगाडि छौँ । मागका आधारमा यो निष्कर्ष निकालेका हौँ । ढुवानीका कारण सिमेन्ट उद्योगले केही हदसम्म एउटा निश्चित क्षेत्र तोकेर बजारीकरण गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । जस्तो पश्चिम नेपालको सिमेन्ट उद्योगले पश्चिममै बजार बनाउन बल गर्छ । पूर्वकोले यस्तै गर्छ । हामी बागमती, नारायणी र गण्डकीमा विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ । यो क्षेत्रमा हाम्रो स्थान धेरै माथि छ ।
ओपिसी सिमेन्ट मात्र किन उत्पादन गर्नुहुन्छ ?
कुनै पनि सिमेन्टको आप्mनो विशेष गुण हुन्छ । सिमेन्टमा मुख्य हेरिने भनेकै सेटिङ टाइम र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो । ओपिसी सिमेन्टको माग बढी छ । नेपालको बजारमा अहिले पिपिसी सिमेन्टबाट ओपिसी सिमेन्टतर्फ झुकाब बढेको देखिएको छ । सिमेन्टको क्षमता नघटी चाँडै काम होस् भन्ने सोच सबैको हुन्छ । अझ भनौँ, उपभोक्ता हतार गर्न थाले । त्यसैले छिटो सेटिङ हुने ओपिसी सिमेन्टको माग बढेको छ । ओपिसी सिमेन्टमा क्लिंकरको मात्रा ९५ देखि ९८ प्रतिशतसम्म हुन्छ । त्यसैले यो चाँडै सेट हुन्छ । उसले प्राप्त गर्ने भारवहन क्षमता चाँडै प्राप्त गर्नुका साथै बलियो पनि हुन्छ । २८ दिनमा यसले पूर्ण क्षमता प्राप्त गर्छ । अर्थात् ढलान गरेको २८ दिनमा यसको पूरा क्षमता आउँछ । त्यसैले ओपिसीको माग बढी छ । त्यसैले हामीले ओपिसी सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्दै आएका छौँ ।
अहिलेको प्रतिस्पर्धामा युनाइटेड सिमेन्ट के कारणले अन्यभन्दा फरक र प्रतिस्पर्धी छ ?
युनाइटेड सिमेन्टले आफूलाई चाहिने क्लिंकर आप्mनै खानीबाट निकाल्छ । आफ्नै र एउटै चुनढुंगा खानी भएकाले एउटै ठाउँबाट ल्याएको कच्चा पदार्थका कारण गुणस्तरमा स्थायित्व र एकरूपता हुन्छ । जुन सिमेन्टमा हुनैपर्ने कुरो हो । त्यो सिमेन्टमा हुनुपर्ने एकरूपता युनाइटेड सिमेन्टसँग छ । क्लिंकर आफैँले बनाउने हँुदा यसको गुणस्तर हाम्रो नियन्त्रणमा रहन्छ । हामी क्लिंकरमा कोहीसँग आश्रित हुनुपर्दैन । त्यस्तै, क्लिंकर स्टोरेज अर्को पक्ष हो । जसरी सिमेन्ट स्टोर गर्न विशेष प्रकारको ओभानो गोदाम चाहिन्छ । क्लिंकर पनि त्यत्तिकै सावधानीसाथ स्टोर गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले क्लिंकर स्टोरेज गर्ने स्थान नै बनाएका छौँ । हाम्रो उद्योग काठमाडौंबाट धेरै नजिक छ । त्यसैले उपभोक्ताले फ्रेस सिमेन्ट पाउँछन् । भोलि ढलान छ भने आज सीधा निर्माणस्थलमा निर्माण गरेलगत्तै ट्रकमा लोड गरेर भोलि बिहान निर्माण स्थलमा झार्न सकिन्छ । त्यसैले हामी काठमाडौंजस्तो बजारमा ताजा सिमेन्ट दिन सक्छौँ ।
अहिले युनाइटेड सिमेन्टको माग र उद्योगको क्षमता कस्तो छ ? मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन भने ढलान रोकिन्छ नि ?
युनाइटेड सिमेन्टले मागअनुसारको आपूर्ति गर्न सक्छ । किनकि यसको दैनिक क्षमता नै २१ हजार बोरा छ । त्यसैले युनाइटेड सिमेन्टको माग र आपूर्ति पनि बढिरहेको छ । कहिलेकाहीँ सिजनको समयमा एक वा दुई दिन ढिला होला । तर, दुई दिनअघि अर्डर आयो भने हामी समयमै डेलिभरी दिन सक्छौँ ।
तपाईं युनाइटेड सिमेन्ट गुणस्तरीय छ भनेर दाबी गरिरहनुभएको छ । सँगै उपहार पनि राख्नुभएको छ । गुणस्तरलाई उपहारको माध्यम चाहिन्छ र ?
कुनै पनि सामान गुणस्तरीय छ भन्ने थाहा पाउन उसले पहिले प्रयोग गर्नुप¥यो । जति मीठो पकवान भए पनि यो स्वादिलो छ भन्ने थाहा दिन कसैलाई चखाउनुप¥यो । अहिलेको उपहार पनि चाख्नका लागि हो । एकपटक युनाइटेड सिमेन्ट प्रयोग गरेपछि ग्राहकले फेरि दोहो¥याएर प्रयोग गर्न उपहार छ कि छैन भनेर खोज्दैन । साथै अर्को ब्रान्डको सिमेन्टमा उपहार रहेछ भने पनि वास्ता गर्दैन । यो सिमेन्ट एकपटक प्रयोग गरेर हेर्नुस् भन्नका लागि उपहार योजना राखेका हौँ । त्यसैले यो लामो समय दिनुपर्दैन । उपहार योजनामा कुनै अन्य वस्तु दिन्छु भनिएको छैन । यही गुणस्तरीय सामान बढी दिन्छु भनेको हो । अर्थात् यो स्किम भनेको गुणस्तरीय सिमेन्ट खोज्नेलाई सहयोग पनि हो ।
प्रस्तुति : सुदीपकुमार ढुंगाना